कति जापानीले बोल्छन् अंग्रेजी भाषा ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 02:51:47
जापानी समय : 06:06:47
Tag: कति जापानीले बोल्छन् अंग्रेजी भाषा ?
कति जापानीले बोल्छन् अंग्रेजी भाषा ?
आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्परालाई दह्रोसंग पछ्याइरहेको जापानमा यतिबेला अंग्रेजी भाषाका ज्ञानका विषयलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ । अंग्रेजी भाषाको व्यापकताबिना नै विकासको उत्कर्षमा पुगेको जापानलाई आसन्न ओलम्पिक खेलका समयमा भने भाषाको समस्या पर्ने भएको छ ।
त्यसैले सन् २०२० मा टोकियोमा हुन लागेको ओलम्पिक र प्यारा ओलम्पिलाई मध्यनजर गर्दे जापान सरकारले अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी एक कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले जनमानसमा अंग्रेजी भाषाको कतिको ज्ञान छ र तीनहरुको कतिको बोल्न सक्छन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
जापान शिक्षा बोर्डको सहकार्यमा त्यहाँको एक निजी कम्पनीले आउँदो सेप्टेम्बरदेखि युवा परिचालन गरी यसको थालनी गर्ने समाचारमा जनाइएको छ ।
अंग्रेजी भाषाको ज्ञान कति छ भन्ने बुझ्न टोक्यो ग्लोबल गेट वे नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुले अस्पताल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा गई त्यहाँ मानिसहरुसंग अंग्रेजी भाषामा कुराकानी गर्नेछन् ।
सरकारले ओलम्पिक र प्याराओलम्पिकमा आउने पर्यटकलाई जापानमा कतिको सहज हुने छ भन्ने विषयलाई लिएर यो कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
Posted in जापानTagged कति जापानीले बोल्छन् अंग्रेजी भाषा ?